စမ်းချောင်းရှိ အတိုးမဲ့အရစ်ကျဖြင့် ၀ယ်ယူနိုင်မည့် Padonmar Condo
Padonmar Condominium သည် စမ်းချောင်းမြို့နယ် တွင်တည်ရှိပြီး 70% ဆောက်လုပ်ပြီးစီးပြီးဖြစ်သည်။ အတိုးမဲ့အရစ်ကျဖြင့် ၀ယ်ယူနိုင်မည်။ အိပ်ခန်း ဖွဲ့ပေးပြီး ရေချိုးခန်း ၊ အိမ်သာ ကို ကြွေပြားများကပ်ပေးမည်။ ဘိုထိုင်၊ ဘေစင်၊ shower၊ tap၊ ရေပူ ၊ ရေအေးလိုင်းများ ပြုလုပ်ပေးမည်။ Ceiling...
ကလောမြို့ Pineland Oasis Hotel အနီးရှိ Pinewood Villa လုံးချင်းအိမ်ရာ စီမံကိန်း
Pinewood Villa အိမ်ရာစီမံကိန်းနယ်မြေအတွင်း၌ Pineland Oasis Hotel နှင့် တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း ဖြစ်ပြီး လုံးချင်းလူနေအိမ်အဆောက်အဦး (၁၄) လုံးပါဝင်သည့် သီးသန့်အိမ်ရာ စီမံကိန်းငယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဟဲဟိုးလေဆိပ်နှင့် မိနစ် (၃၀) ခန့်တွင်ရှိသည်။ Pinewood Villa...
Kangyi Paradise တွင် ဖော်ဆောင်နေသော မြေကွက် နှင့် Service Apartment
1. မြေကွက်များ * ပေ ၂၅ x ပေ ၇၅ / ပေ ၅၀ x ပေ ၇၅ / ပေ ၇၅ x ပေ ၇၅ * ခြံစည်းရိုးခက်ပေးခြင်း* မြေသားများညှိပေးခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပေးပါမည်။ပါဝင်မည့် Facilities များ- Swimming Pool- Restaurant- Tennis Court x 2- Playground- Garden- Mini Mart 2. Hotel Apartment များ * ပေ ၁၃.၅ x ပေ ၃၂* Furniture အပြည့်အစုံဖြင့် အခန်းအပ်မည်။✔ Service Apartment ဖြစ်သဖြင့်3Star Hotel...
အမှတ် (၉) ၊ မြင်းရဲအင်းရပ် ၊ (၇) ရပ်ကွက် ၊ ကလောမြို့  ( ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးမှ လာပြီး မြို့ ပတ်လမ်းထဲ ချိုးဝင်တာနဲ့ ရောက်ပါမည်) တွင်တည်ရှိပါသည်။ ♦️♦️♦️ မြေကွက်အရွယ်အစား အကျဉ်းဆုံး 4000sqft မှ အကျယ်ဆုံး 8600sqft အထိ ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မည်။ ♦️♦️♦️ မြေဧက...
သန်လျင်တံတားအဆင်းရှိ Star City Condominium
Star City Condominium ကို သန်လျင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် Yoma Strategic Holding Limited မှ တာဝန်ယူတည်ဆောက်ထားပါသည်။ Location Map
ပုလဲကွန်ဒို - Pearl Condominium
ပုလဲကွန်ဒို (Pearl Condominium) ကို ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းနှင့် ဆရာစံ လမ်းထောင့် ၊ ဗဟန်းမြို့နယ် တွင် Asia Express Development Co., Ltd. မှ တည်ဆောက်ထားပါသည်။ ၈ လွှာ အမြင့်ရှိပြီး အဆောက်အဦး (၆) လုံးတည်ဆောက်ထားသည်။ အဆောက်အဦး (၆) လုံးမှာ Type A, Type B,Type C,Type D,Type E,Type F . အခန်းအကျယ်အ၀န်းမှာ (၁၀၀၀ ကျော်...
ရန်ကုန်မြို့၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ လမ်း(၅၀)နဲ့ (၅၁)လမ်းကြားမှာ မဟာန၀ရတ်တာဝါကို မြန်မာရွှေဥဒေါင်းမင်းနှင့် မဟာန၀ရတ်မြေ ဆောက်လုပ်ရေးမှ တာဝန်ယူ တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ မဟာန၀ရတ်တာဝါကိုတော့ မြေဧရိယာအကျယ်အ၀န်း ပေ ၁၃၂ x ပေ ၁၃၂ ပေါ်တွင် စုစုပေါင်း...